Wasiirka Gaashaandhigga oo Baarlamaanka uga jawaabay sababtii dowladda ay ciidamo u geysay Dhuusamareeb – Kalfadhi
Wasiirka Gaashaandhigga oo Baarlamaanka uga jawaabay sababtii dowladda ay ciidamo u geysay Dhuusamareeb
Xildhibaannada Golaha Shacabka Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa shalay su’aalo weydiiyay Wasiirka Wasaaradda Gaashaandhigga Xukuumadda Soomaaliya, mudane, Xasan Cali Maxamed (Amar-dambe).
Kulanka waxaa shir guddoominaayo guddoomiye ku xigeenka kowaad ee Golaha Shacabka mudane Abdiweli Sheikh Ibraahim Muudeey iyo guddoomiye kuxigeen 2aad Mudane Mahad Cabdalla Cawad.
Wasiirka ayaa su’aalihii la weydiiyay waxaa kamid ahaa ciidanka dowladda ay geysan magaalada Dhuusamareeb iyo howgallada ciidanka ay ka wadaan deegaannada Shabeellaha Hoose, oo hoos u dhac ku yimid.
Wasiirka oo ka jawaabayay su’aalahaasi ayaa yiri “Ciidamada Gor-Gor waxaa ay ka tirsanyihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sidaasi awgeed waxaa ay ka howlgalli karaa dhammaan dalka Soomaaliya. Waxaan shaqo badan gellinay in dib-u-habeyn lagu sameeyo ciidanka xoogga si loo helo ciidan qalabeysan oo tayo leh si waajibaadkooda dastuuriga ah ay u gutaan”.
“Galmudug waxaa laga sameeyay qorshaha isku-dhafka ah waxaan dooneynnaa in hadda ciidanka loo bedelo kuwo qaran. Ciidanka Ahlusuna ayaa waxaa lagu daray kuwa qaranka. Ciidanka la geeyay Galmudug ma ahan Gor-gor waa ciidan kale oo Baladweyne laga qaaday”.
W/Q Hassan Istiila
Faarax Sheekh Cabdiqaadir “Qoondeynta kuraasta deegaanada waa arrin qatar ah”
Wasiirka Gaashaandhigga oo faah-faahin ka bixiyay sababta ciidanka ilaalada u ah xildhibaannada loogu reebo banaanka madaxtooyada